Izindlela Ezinhlanu Eziqinisekile Zokukhuthaza Ukuguqulwa Kwakho Kwemidiya Yezokuxhumana | Martech Zone
Akunakuphikwa ukuthi indlela ephumelela kunazo zonke yokufinyelela nokwakha ukuxhumana okungokomzwelo nabangaba amaklayenti kungokuxhumana nomphakathi. Umuntu angathola izigidigidi zabasebenzisi ezinkundleni zokuxhumana ezahlukahlukene; kungaba yimfucuza enkulu ukungasebenzisi leli thuba elihle kangaka. Kulezi zinsuku kumayelana nokufuna ukubonwa, ukuzwiwa, nokuzizwa, yingakho cishe wonke umuntu eya kuma-akhawunti akhe ukuyokhipha imicabango yakhe.
Umuntu kufanele aziqonde ngokugcwele lezi zinkundla zokuxhumana ukuze aqhamuke nesu elizokhulisa ukuguqulwa. Kungakhathaza kakhulu ekuqaleni ngoba kuthatha isikhathi ukuthi imiphumela elindelekile ibonakale. Ukuphela kwendlela yokwenza lokhu ukutadisha ukuthi amapulatifomu asebenza kanjani bese uqhamuka nohlelo lukakhonkolo ngaphambi kokuchitha izinkulungwane zamaRandi emikhankasweni ezohluleka nakanjani.
Izwe eliku-inthanethi licebile ngolwazi lokuthi ungalikhulisa kanjani ithrafikhi yezokuxhumana nokuguqulwa kodwa ngokubona ukuthi lokhu kungacindezela kanjani abantu, salinciphisa laze lafika kwabahlanu. Ake siqale ibhola eligingqikayo:
Kunengqondo ngemuva kwalesi sithombe, "isithombe sidweba amagama ayinkulungwane". Konke kwenzeka ngokushesha okukhulu kulezi zinsuku futhi abantu abasenaso isineke sokuqeda ukufunda indatshana ende. Bayifuna ngokushesha, futhi enye indlela yokwenza lokhu ngukubukwa. I-infographics, izethulo, amavidiyo, izithombe kufakazelwa ukuthi zithole ukubukwa okungaphezulu okungu-94% ngaphezulu nokwabelana ngokuqhathaniswa nokuqukethwe okungenakho ukubonwa okunguziro. Futhi uyazi ukuthi yini elula kakhulu ngokubukwayo kulezi zinsuku? Awudingi ukuba ngumpetha futhi ungavele uzidale ngosizo lwe- amathuluzi wesithombe aku-inthanethi. Ukubukwa nakho kuyasebenza ekutholeni ukunakwa komsebenzisi oku-inthanethi, okuyilapho iphuzu lonke likhuluma ngakho.
Ingxenye yokwakha okuqukethwe okufanele ukuchofozwa kunkinobho yokwabelana ukukhomba ukuthi izethameli eziqondiwe zingobani. Amaqoqo ahlukene wamazwi anxenxa abantu abavela kubakaki bobudala obuhlukile, ubuchwepheshe, kanye nezintshisekelo, yingakho kubalulekile ukwazi lawa ma-personas. Abantu banezindawo ezithambile zamabhizinisi abangahlangana nazo, futhi enye indlela yokwenza lokhu ukukhuluma ulimi lwabo. Lapho ukuqonda kwezethameli kujule, kuzoba lula ukudala okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu, okufanele ukwabiwa.
Izimangaliso Zokusekelwa Kwamakhasimende
Ukuthola ukunakwa kwekhasimende kuyinto eyodwa, kepha ukwazi ukuthi kunabantu abakulungele ukubasiza nokubhekana nokukhathazeka kwabo kungenye yezindlela eziqinisekile zomlilo zokuguqulwa. Kunezinsizakalo eziningi zemiyalezo ezivumela amabhizinisi ukuthi axhumane nezithameli zawo eziku-inthanethi ezingeni lomuntu siqu. Abantu bacishwa kalula uma imibuzo yabo ingaphendulwa yingakho bethanda izinkampani ezithatha isikhathi ukuphendula imibuzo yazo. Kunezinketho zokushintsha izimpendulo ngokuzenzakalela, umuntu kufanele aqaphele lapho efuna le ndlela ngoba futhi ingacisha ikhasimende ikakhulukazi lapho izimpendulo zingenziwanga ngezifiso noma zizwakala sengathi zivela emshinini.
Ukucindezela Izinkinobho Ezifanele
Ukuguqulwa kuxhunywe ngqo ezinkinobho zokubizela esenzweni. Akunandaba ukuthi okuqukethwe kukuhle kangakanani, uma ikhasimende elingaba khona lingayitholi inkinobho yokubizela esenzweni, ukuguqulwa ngeke kwenzeke. Lezi zinkinobho zishesha ukuthengiselana okuphephile nokungenamthungo, kungaba yinto elula njengokuya kuwebhusayithi yenkampani noma ukuthenga umkhiqizo. Inqubo edinga izinyathelo eziningi itholwa ngokuchofoza okukodwa yingakho lezi zinkinobho kufanele zibe phezulu phezulu kuhlu olubaluleke kakhulu lapho ziza necebo lomkhankaso wezokuxhumana.
Yazi Okufanele Ukusho
Enye indlela yamasu wokubeka phezulu phezulu kwemiphumela yokusesha ukusebenzisa amagama angukhiye afanele. Lokhu kusiza ukukhulisa izinga lokusesha le-organic lewebhusayithi, futhi kuyinto ebalulekile ekukhangisweni kosesho olukhokhelwayo. Icala ngephuzu: ama-hashtag. Lokhu kubalulekile ekwenzeni okuqukethwe kubonakale ngoba kuheha abalandeli nabangewona abalandeli, futhi bangaholela abathengi abangaba khona kuwebhusayithi yenkampani futhi bathenge umkhiqizo.
Ukukhuthaza ukuguqulwa kumayelana nokungaguquguquki, ukuqonda okujulile kwenkundla yezokuxhumana, ukukhomba ukuthi izethameli eziqondiwe ngubani, nokwazi ukuthi yimaphi amagama noma izithombe okufanele uzisebenzise. Abantu bayashesha ukwabelana ngokuqukethwe abangakuqonda, ngakho-ke kungcono ukufaka into yomuntu noma engokomzwelo kokuqukethwe. Bahambise.
Tags: ukuguqulwasocial mediaimibono
IViduPM: I-Online SEO Project Management, Ukubika, nePulatifomu Yokukhokha